Fotoam-piraisam-be amin'ny namana 34
Inona ireo fahasamihafana manan-danja eo amin'ny Theosophy and New Thought?
Ireo antony manosika, fomba ary famaritana.
Ireo fahasamihafana ireo dia tsy mifototra amin'ny resaka sy fihetsika izay antsoina hoe theosophists na ireo mpandinika vaovao, fa amin'ny bokin'ny teôsôsista sy ny eritreritra vaovao. Ny ankamaroan'ny mpikambana ao amin'ny fiarahamonina teôlôjika amin'izao fotoana izao dia manao fanambarana ary manao fihetsika tsy mitombina toy ny ankamaroan'ny vahoaka amin'ny fisainana vaovao. Ny andiany tsirairay dia mampiseho ny lafiny maha-olombelona izay miasa amin'io fotoana io. Ny fotopampianaran'ny Theosophy dia: karma, lalàn'ny fahamarinana; reincarnation, ny fampandrosoana ny saina sy ny momba ny vatana sy ny vatana hafa amin'ny alàlan'ny fiverenan'ny saina avy amin'ny fiainana any amin'ny vatan'olombelona ao amin'ity tontolo ara-batana ity; ny lalàm-panorenana fito izay, ny fotokevitra sy ny fifaneraserany izay miditra amin'ny toetran'ny olona; ny maha-lavorary ny olombelona, ​​ny olona rehetra dia mety ho andriamanitra ary eo amin'ny herin'ny olombelona rehetra ny fahatongavana ho lavorary ambony indrindra ary lasa tonga saina sy mahay am-panahy miaraka amin'Andriamanitra, ny sain'izao rehetra izao; ny firaisankina, ny olona rehetra dia avy amin'ny loharano iray ihany ary ny fifandraisan'ny lehilahy rehetra ary ny fomban'izy ireo na dia tsy mitovy aza ny ambaratongam-pandrosoana, ary ny ara-panahy dia manana adidy sy mifandraika amin'ny samy fianakavian'ny fianakaviana iray, ary andraikitry ny mambra tsirairay ao aminy ny manampy sy ny fanampiana ny hafa arakaraka ny heriny sy ny fahaizany.
Nandrisika na nanoro hevitra ao amin'ny bokin'ny teôsôsôista sy ny fisaintsainana vaovao ny hafa. Ny antony manosika ireo foto-kevitra teôsôsôsika dia ny: manaraka ny takian'ny Karma amin'ny fanatanterahana ny adidin'ny olona iray, izany hoe adidy, satria ny lalàn'ny fahamarinana no notakian'izy ireo; na rehefa manao izany dia hisy olona manao karma tsara; na satria mety izany - izay ny adidy dia hatao tsy misy tahotra sy tsy misy valisoa. Ny tsy fahafatesana na ny fahatanterahana dia tsy andrasana satria ny fahatanterahany ny olona iray dia ho afa-mandositra ny andraikitra ary hankafy ny voany, fa noho ny fahazoana izany dia ahafahana manampy ny hafa amin'ny fandresena ny tsy fahalalana, ny alahelo ary ny fahantrana ary ny tanjona mitovy. Ny antony manosika ny tombotsoan'ny asa vaovao no voalohany mahatsara azy, amin'ny ankapobeny ho tombontsoa ara-batana, sy ny fankafizany, ary avy eo ilazana amin'ny hafa fa afaka mahazo ny faniriany koa izy ireo.
Ny fomba atolotry ny Theosophy momba ny fahazoana ny mombamomba azy dia ny fanaovana ny andraikitry ny olona na aiza na aiza toerana, amin'ny alàlan'ny fihetsika, tsy fitiavan-tena ho an'ny tsara ho an'ny hafa, amin'ny fifehezana ny faniriana amin'ny alàlan'ny faharanitan-tsaina, amin'ny alalàn'ny fahazavana ary ny fanolorany fotoana mahamety azy. vola sy miasa amin'ny fampielezana ny fotopampianarana. Izany dia vita, tsy misy vola na fiampangana na inona na inona karazana. Ny fomba fiasan'ny eritreritra Vaovao dia ny hanomezana tombontsoa ara-batana sy fahafaham-po ara-tsaina, ary ny vola dia aloa ho an'ny taranja amin'ny fampianarana amin'ny eritreritra sy ny fampiharana azo ampiharina.
Ny fahasamihafana hafa dia ny fotopampianaran'ny Theosophy dia voafaritra tsara, raha ny momba ny fitsipika sy ny fanambarana; raha toa kosa, ny fikambanam-piangonana vaovao dia tsy mitombina ny fanambaràna, ary ny tsy fahatakarana ny teny sy ny filozofia dia aseho ao amin'ny fampianarana. Ny fampianaran'ny eritreritra vaovao dia miresaka am-pahalemem-panahy, raha toa ka ny karma sy ny fahaterahana indray. Ny sasany amin'ireo mpanoratra dia miresaka ny fitsipiky ny fito na ny sasany amin'izy ireo; noheverin'izy ireo fa masina ny olona ary avy amin'ny zava-misy, ary mino fa mpirahalahy ny lehilahy. Saingy ny tsy fisian'ny famaritana amin'ireo fampianarana vaovao momba ny Fieritreretana ity izay tsy fitovian-kevitra amin'ny fanambarana mivantana sy manery ao amin'ny boky teôsôpika.
Ny zavatra mampiavaka izany dia: ny antony manosika ny mpanaraka an'i Theosophy dia ny tsy fitiavan-tena sy ny fanompoana amin'ny tanjona ny hahatongavan'Andriamanitra ao anatiny, fa kosa ny antony manosika ny tombam-bidy vaovao dia ny hampihatra ny vaovao toy ny ananany ho an'ny tena manokana sy ny harena ara-nofo. ary tombony. Ny fomba fiasan'ny olona manaraka an'i Theosophy dia ny fampielezana ny fotopampianarana nefa tsy andoavambola; raha toa kosa, ny takelaka vaovao dia milaza fa mendrika ny karamany ilay mpiasa ary mandoa vola ho an'ny tombony izy, na tombony azo lazaina, nomena. Ny mpanaraka ny Theosophy dia manana zavatra sy fotopampianarana voafaritra mazava ho azy, fa ny mpinin'ny Fikiran-kevitra vaovao dia tsy manokana amin'ny foto-pinoana, fa manana finiavana sy falifaly ary matoky fa hahazo izay rehetra tadiaviny. Tsy mitovy ireo araka ny fotopampianarana sy ny boky, fa ny antsoina hoe theosophist dia olona sy malemy ary koa ny takelaka vaovao; ny tsirairay dia samy mihetsika araka ny toetrany na eo aza ny fahareseny na ny finoany manokana.
Izay manomboka ny Theosophy dia manomboka ny fisainana vaovao. Ny Theosophy dia manomboka amin'ny adidin'ny olona iray amin'ny fiainana, ary mikendry ny hanatratra ny fahatanterahana eo amin'ny tontolo ara-batana; ary amin'ny alàlan'ny fahatanterahana, lavorary ao amin'ny tontolo ara-panahy. Ny eritreritra vaovao dia manomboka amin'ny finoana feno fahatokisana sy matoky ny maha-Andriamanitra azy ary toa miafara amin'ny fahatongavana ara-batana, harena, fanambinana ary fahasambarana - indraindray ary mandritra ny fotoana voafetra.
Inona no antony mahatonga ny homamiadana? Misy fanasitranana mahazatra ho azy ve sa misy fomba fitsaboana tsy maintsy hitranga alohan'ny hanasitranana azy?
Misy antony avy eo mahatonga ny homamiadana. Ny antony haingana dia ireo izay voasokitra amin'izao fiainana izao. Ny antony lavitra dia niainga ary avy amin'ny fihetsiky ny saina tamin'ny fahaterahan'ny olombelona taloha. Ny antony avy hatrany amin'ny fisehoan'ny homamiadana dia toy ny fikosoham-bary na tohizana mitohy, izay mahatonga ny sakana amin'ny mivezivezy amin'ny ra, ny fihanaky ny vatan-jaza ary manome vahana ny tany mahaliana amin'ny fivoaran'ny, izay inoana fa kansera homamiadana, na mety ho izany noho ny sakafo tsy mety izay tsy hain'ny vatana no mamelona na moka sy noho ny antony mahatonga ny mikraoba homamiadana, na izany aretina izany dia mety noho ny famerana, ny fanerena ary ny famonoana, fa ny fitazonana ny vatan'ny tsiranoka lehibe mandritra ny fanao ara-nofo. . Ny famonoana, fihazonana ary fivondronana ao amin'ny vatan'ny mikraoba velona dia ny tany lonaka izay miantso ny mikraoba homamiadana; amin'ny alàlan'ny fanohizana ny fampiharana dia mitombo ny homamiadana ny vatana. Ny toe-javatra mitovy amin'izany dia mety omen'ny tsy fahatomombanan'ny vatana mitondra ny mikraoba ilaina amin'ny fahamatorana, tsy nahavita izay nahatonga ny mikraoba aina maty sy mihalevona ary mitoetra ao anaty vatana izay tsy maha-assimilate na mampihena azy ireo.
Ny antony lavitra dia naterin'ny saina avy amin'ny zavatra nataony tamin'ny fidirany taloha izay nandraisan'ny saina ny tafahoatra sy ny tsy fihoaram-pefy, fa tao anatin'izany dia nanjary tsy nijinja ny fijinjana izay namafy izany izy avy eo, toy izany koa ireo olona efa zatra ny fombafomba maloto sy ratsy amin'ny fiainana ankehitriny dia mety tsy hijinja izao, fa ny mamafy, ny antony hijinjana ho avy - raha tsy mametraka antony mifanohitra amin'ny fisainana sy ny fihetsika ankehitriny. Raha tsy misy ny homamiadana dia nafindra na nafindra, ny tranga rehetra dia voan'ny homamiadana; izany hoe izy ireo dia vokatry ny hetsika sy fifaneraserana eo amin'ny saina sy ny faniriana eo amin'ny sehatry ny vatan'ny olona iray. Io hetsika eo anelanelan'ny saina sy ny faniriana io dia tokony ho nitranga tamin'ny fiainana ankehitriny na tamin'ny fiainana talohan'ny fiaingana. Raha efa nipetraka tamin'n'izao fiainana izao izy io dia hekena fa io no antony mahatonga ny homamiadana rehefa nitarika azy ny saina. Raha tsy nisy na iray aza ny antony na toy izany koa no napetraka amin'ny fiainana ankehitriny, izay ahitana ny homamiadana, dia noho ny aretina lavitra izay mety ho fantatra ny aretina. Mety hanohitra ny lalàna mandritra ny fotoana kelikely ny olona iray, fa izy kosa nohamarinina ara-potoana. Mety ho rava ny sela homamiadana sy ny fivoarany, saingy ny kansera amin'ny homamiadana dia tsy ara-batana ary tsy ho potika amin'ny fomba ara-batana izany. Ny mikraoba homamiadana dia astral ary endrika izay ahitana ny sela sy mivoatra, na dia mampiseho aza ny sela kansera amin'ny sela kansera. Azo tsaboina sy ovaina amin'ny fomba ara-batana ny sela sy ny mikraoba.
Misy ny fitsaboana ny fanasitranana ny homamiadana, ary efa nanasitrana ny fitsaboana. Ny fanasitranana dia namboarina tamin'ny fitsaboana Salisbury. Fantatra efa ho efapolo taona mahery ity fitsaboana ity, saingy vitsy ny dokotera no nanandrana izany. Ny fitsaboana Salisbury amin'ny aretina dia tsy nahita sitraka tamin'ny asan'ny mpitsabo. Ny vitsivitsy izay nanandrana izany tamim-pahamarinana, dia nahazo valiny niavaka tamin'ny fitsaboana ny ankamaroan'ny antsoina hoe aretina tsy azo sitranina. Ny fototry ny fitsaboana amin'ny Salisbury dia ny fihinanana omby henjana mangotraka izay nesorina daholo ny tavy sy ny fibre ary ny fifandraisana mifangaro, ary ny sakafo dia miaraka amin'ny fisotroana rano mafana latsaky ny adiny iray sy sasany alohan'ny sy aorian'ny sakafo . Io fitsaboana io dia tena tsotra ary tsy lafo ho an'ny ankamaroan'ny mpitsabo. Na izany aza, ity fitsaboana ity, rehefa ampiharina, dia mamely eo amin'ny fakany ary manasitrana ny aretina rehetra saika fantatra. Ny henan'omby malefaka tsara, izay nesorina ny tavy sy ny tavy, ary ny rano dia manolotra fitaovana faran'izay tsotra sy manan-danja indrindra hitazonana ny vatan'ny biby mahasalama. Ny fihinanana hen'omby malefaka sy ny fisotroana rano madio dia misy fiantraikany amin'ny vatana ara-batana sy ny mpifoka volony, ilay vatana endrika. Ny henan-kena dia tsy hanome ilay zavatra mahasoa amin'ny fitomboana sy ny fivoaran'ny mikraoba izay mety mitondra aretina amin'ny vatana izay itondran'ny hena. Rehefa tsy voafehin'ny aretina ny famatsiana sakafo ary alaina ao anaty vatana ny sakafo toy ny tsy afaka ampiasain'ny aretina, fa mahasoa amin'ny vatana kosa, dia maty io aretina io. Ka rehefa raisina amin'ny vatana ny henan'omby, dia tsy hanome sakafo mahasoa amin'ny homamiadana na mikraoba aretina izany, ary raha tsy voatahiry ny sakafo hafa, dia maty tsikelikely ny fitomboan'ny tsy salama ao amin'ny vatana ary hanjavona amin'ny fizotran'ny mosary. Mety haharitra taona maro izany ary mety hipoitra ny vatana ary mahatsiaro ho malemy ary reraka ara-batana. Izany toe-javatra izany dia noho ny fahatsiarovan-tena amin'ny ampahany marobe amin'ny vatana, fa raha maharitra kosa ny fitsaboana amin'ny vatana dia hahazo fahasalamana indray. Ny zava-mitranga mandritra ny fizotrany dia ny mamela ilay vatana vatana marary taloha dia avela tsikelikely ho faty ary esorina, ary amin'ny toerany dia mitombo sy mivoatra tsikelikely, vatana ara-batana iray hafa miorina eo amin'ny henan'omby. Ny fisotroana ny rano mangotraka dia nalaina mafana nandritra ny adiny iray sy sasany talohan'izay ary aorian'ny sakafo dia zava-dehibe toy ny fihinanana ilay hena, ary tsy tokony hohanina ny hena hanasitrana aretina tsy misotro rano mafana ary amin'ny fotoana voatondro. Ny fisotroana rano mafana be dia manala ny asidra sy ny zavatra manimba ary mandroaka azy amin'ny vatana, ary ao anatin'io rano io dia esorina amin'ny vatana io resaka io. Ny hena dia sakafo hanin'ny vatana; mitete sy manadio ny vatana ny rano. Manamboatra sela salama ao amin'ny vatana ny hen'omby matanjaka, saingy ny hena tsy hikasika na misy fiantraikany mivantana amin'ny mikraoba homamiadana tsy hita maso. Rano mafana no manao an'io. Ny rano mafana dia misy fiantraikany sy manova ny mikraoba homamiadana sy ny mikraoba hafa ao amin'ny vatana ary manamboatra izany amin'ny filan'ny vatana.
Ny vatana iray natsangana tamin'io fototra io dia madio sy mahasoa ary fitaovana miasa tsara ho an'ny saina. Amin'ny alàlan'ny fitsaboana toy izany dia tsy ny vatana ara-batana sy astraly ihany no miova ary manjary salama, fa ny faniriana koa dia voakasik'izany, voatsindrina ary voaofana. Ny fikarakarana ny aretina amin'ny Salisbury ihany no mifandraika amin'ny vatana ara-batana izay sehatra ny sela homamiadana sy ny vatana astral izay seza seza mikraoba. Amin'ny alàlan'ny fitsaboana Salisbury dia voaofana, tsy ankolaka ny saina, satria ny fahavitrihana lehibe ary tsy maintsy ampiasain'ny saina mba hihazonana ny vatana sy maniry mafy ny fitsaboana. Betsaka ny tsy mahomby amin'ny fitsaboana satria tsy mitana izany ary noho ny tsy fahaizana mandanjalanja sy fikomiana izay matetika miseho amin'ireo manandrana izany ary tsy maharesy azy ireo. Raha esorina ny fikomiana ary tsy mahasolo toerana ny saina sy ny fahatokisan-tena, dia hisy fanafody tsy azo ihodivirana. Amin'ny fampiofanana ny vatan'ny olona iray araka ny fomba mahay mandanjalanja, ny saina dia fehezin'ny fiasan-tena ary mianatra ny fahaiza-manaony tsy ny vatana ihany fa ny fikorontanana sy tsy mahaizy azy. Rehefa misy fifandraisana mirindra eo amin'ny vatana sy ny aretin-tsaina dia tsy mahita trano ao an'io vatana io. Tsy hiteraka aretina ny mikraoba homamiadana sy ny sela raha tsy mahavita mampiasa azy ny lalàm-panorenana. Misy otrikaretina sy sela marobe ao amin'ny ankamaroan'ny vatan'olombelona. Raha ny tena izy, maro be ny mikraoba ao anaty vatan'olombelona. Ny iray amin'ireny dia hiteraka aretina marefo raha toa ka tsy toa izany ny toe-piainana toy ny hitazomana ny mikraoba ao anaty sy hitahiry vatana voarindra tsara. Ny aretina mikraoba mbola tsy fantatra ao anaty vatana, fa ny vatana sy ny saina kosa tsy mbola nanome ny fepetra izay hampahafantatra an'izao tontolo izao ny mikraoba ho aretina manokana. Mety ho voaporofo izy ireo na oviana na oviana amin'ny fotoana hahafantaran'ny saina ny aretina mety hitranga, ary ny toe-piainan'ny pathological dia omen'ny fisakafoanana sy ny fiainana tsy mety.
Ny mikraoba homamiadana sy sela dia tafiditra ao anatin'ny vanim-potoana teo amin'ny tantara sy ny fandrosoan'ny taranak'olombelona rehefa nanao firaisana ara-nofo ny vatan'ny olona. Tamin'io vanim-potoana io dia tsy ho azo atao ny manana aretina ankehitriny antsoina hoe homamiadana satria izany no sela mahazatra ampiasaina amin'ny fananganana vatana. Ny hazakazaka misy antsika ankehitriny dia nahatratra ny fivoarany izay mitondra azy ho any amin'ilay fiaramanidina mitovy amin'ilay nandalovan'ny hazakazaka azy tamin'ny fandraisana andraikitra, izany hoe ilay fiaramanidina izay nahatonga ny tsy fandraisana andraikitra na fampiroboroboana ny lehilahy lahy sy vavy. vatana lehilahy sy vatana vehivavy izay fantatsika izao.
Ny vatana ara-batana dia natsangan'ny fananganana sy famotehana mikraoba tsy tapaka. Ady ny mikraoba. Ny vatana dia miorina araky ny endrika governemanta sasany. Raha miaro ny endriny amin'ny fitondrany izy dia mihazona ny filaminana sy ny fahasalamana. Raha tsy arovana ny filaminana dia miditra amin'ny governemanta ny antoko-mpanohitra ary miteraka fikorontanana, raha tsy miteraka fiovana na fahafatesana. Ny vatana dia tsy mijanona ho mavitrika na mihetsika. Ny tafiky ny mikraoba izay manangana ny vatana sy ireo tafika mikraoba izay miaro azy amin'ny fanafihana sy ny fanafihan'ny mikraoba manohitra dia tsy maintsy afaka misambotra sy mamono ny mpanafika. Izany dia vita rehefa mihinana sakafo mahasoa ny vatana, misotro rano madio, mamofona rivotra mangatsiaka, ary ny olona dia mitaona fisainana salama ary manandrana fisaintsainana sy fihetsika mifanaraka amin'ny antony manosika.